Coronavirus Live Updates Oo Map | Save A tareenka
Coronavirus Live Updates Oo Map
Home > Coronavirus Live Updates Oo Map
Halkan waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan Cusbooneysiinta Coronavirus Live iyo Khariidadda Coronavirus iyo kuwa kale ee nabarrada Coronavirus.
mawduucyada: 1. Waa Maxay Coronavirus
2. Maxaa Ma Update ayaa Xaqiijiyay Covid-19 Kiisaska 3. Coronavirus Live Map Oo Corovnavirus Live Updates
4. Maxay yihiin Calaamadaha Corona Virus 5. Miyaan walaacaan Coronavirus
6. Sidee Corona ma ku fidaa Virus 7. Sida loo bogsii From Coronavirus
8. Waa Maxay farqiga u dhexeeya Coronavirus Oo Hargab xilliyeedka 9. Waa Maxay The Virus Major Risk Iyadoo The Corona
10. Waa Maxay Rate Dhimashadii Of Covid19 11. Coronavirus City By City Map
12. Miyey habboon tahay in aan Safarka Inta lagu jiro Covid-19 dillaaco 13. Waa Maxay The Shabakadaha Best Waayo, Corona News
14. Waa Maxay Muujis The Of Faafidda Coronavirus 15. Ma waxaa jira A Tallaalka Waayo Coronavirus
16. Maxaa dhici doona Iyadoo The Corona Virus 17. Maxaa ka dhigay Covid-19 Si Start
18. coronavirus Aragtida 19. Sida loo Xalliyaan Coronavirus Faafa
20. Waxaad Heli Kartaa Coronavirus jeer 21. Covid-19 Karantiinka
22. Halkee dadku ku qaadaan cudurka Coronavirus Iyadoo 23. Yaa Ka walwal ku habboonayd From Covid19
24. Dalalka Xaggee No Coronavirus 25. Maxaa beddeli doonaa ka dib Covid19 waa ka badan
26. Coronavirus Health Dalalka Safety saraysiinta 27. Hababka Tijaabada Coronavirus
28. Goorma ayuu COVID-19 Dhamaanayaa
A coronavirus waa fayras cusub oo aan hore loo aqoonsaday. virus Corona ayaa sidoo kale loo magacaabay COVID-19, ee la soo dhaafay waxaa jiray coronaviruses kale oo caadi ahaan ka mid ah aadanuhu wareejin iyo sababta cudur khafiif ah, sida hargabka caadiga ah ama SARS ama MERS.
cudurka A la 229E coronavirus, NL63, OC43, ama HKU1 la mid ma aha sida a COVID-19 ogaanshaha.
Maxaa Ma Update ayaa Xaqiijiyay Covid-19 Kiisaska?
Haddii aad rogto wax yar idiin soo dejiyey, sidoo kale waxay yeelan doonaan Maps Live Coronavirus Worldwide, Intaa waxaa dheer in ay covid-19 kiis lambarada hoos ku qoran.
Coronavirus Live Map Oo Corovnavirus Live Updates
La soco oo dhan iyo horumarkii ugu dambeeyay ee Corona ah via Coronavirus Live Map iyo Coronavirus Live Updates page of Save A tareenka
* Haddii aad sii hoos, waxaan sidoo kale Coronavirus a City By City Khariidadda kuu, noqon samir waxay qaadataa qaar ilbiriqsi Live Corona ah Map in load iyo waxaan leenahay 3 shaqada Coronavirus maps kuu.
fudud An inay maraan Covid-19 Map aad u view
Isticmaal mouse inuu kitaabka gudaha iyo banaanka, dulqaad yeelo ilaa ay ka rarneyso Khariidadaha Coronavirus Live
Isticmaal + iyo – astaamaha lagu soo dhaweynayo iyo khariiddadayada Corona virus Map ka dibna arag dhibcaha cas, waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi load.
Source: Arcgis iyo Johns Hopkins University
Inside baabuur Tareenku ay jiraan inta u dhaxaysa 20-48 rakaabka tareenka oo u qalma in ay diyaarad oo sidayaal ah oo ku saabsan 190-400 rakaab ah
Maxay yihiin Calaamadaha Corona Virus?
Calaamadaha Corona Virus (COVID19) la mid yihiin hargabka xilliyeed, sidaa darteed haddii aad ka welwelsan tahay fadlan wac caafimaadka la xiriira ururada ee dalka.
Calaamadaha soo socda ayaa laga yaabaa inuu 2-14 maalmood ka dib soo-gaadhista in Corona Virus:
qufac – Qufac in ay isugu yimaadaan la snot ma aha calaamad u ah Corona Virus.
khasaare ku meelgaarka ah ee dhadhanka iyo urta
Waxay u muuqataa in calaamadaha Corona Virus soo muuqan doono kiisaska intooda badan ka dib 5 maalmood.
Miyaan walaacaan Coronavirus?
Our opinion u gaar ah waa in hadda Coronavirus ma aha ka khatar badan tahay ifilada xilliyeed, Marka ugu horeysa ay jirin xog ku saabsan fayraska, sidaas darteed waxaa jiray sabab looga cabsado, laakiin hadda ayaynu ku garanaynaa inay si degdeg ah uusan faafin, laakiin heerka dhimashada guud ahaan waa dhab ka hooseeya ifilada xilliyeed.
Haddii aad hana Cabsan ka flu, in aadan ka cabsan ama isbedelka qorshaha sababtoo ah Corona ah, raacdo Coronavirus Live Map iyo Coronavirus Live Updates oo arag sida socdo virus iyo aad u gaar ah qiimaynta halista xisaabiyaa.
Isku day inaad sida ugu badan ee aad awoodo in uu sii joogo wanaagsan, maanka saamayn jirka iyo labada saameeya caafimaadka.
Sidee Corona ma ku fidaa Virus?
Virus Corona ayaa sababa u muuqataa COVID-19 in si sahal ah oo joogto ah oo fidsan ee bulshada. Corona hab bulshada Virus, qof ayaa la qaba fayraska Corona aad qaadsiin karaan midkood neefsashada ama qufacu, Hubi in aad ka dhigi waji Duugga! oo aad naftaada ilaaliso sidan.
Hab kale oo ka mid ah sida Corona Virus faafidda waa by taabashada dusha sare la mid ah sida aad sida albaabada ama maro ama lagu ciyaaro, sidoo kale isku day in aadan si ay u isticmaalaan lacagta waraaqaha si ay u ma qaadi la Corona ah.
Ugu dambeyntiina tani maahan kaftan, Corona Virus wuxuu sidoo kale ku faafaa farts, Tani waxay u muuqan kartaa wax lagu qoslo laakiin sida tan ah Baaraha Australia, Fayraska Corona Virus wuxuu ku faafi karaa qeybinta.
safarka tareenka weli waa ammaan badan safarka hawada xataa waqtiyada Coronavirus, sababtoo ah baabuur kasta oo tareen rakaab ah ayaa rakaabka ka yar diyaarad.
Milan in ay Tareenadu Geneva
Rotterdam si Tareenadu Hamburg
Sida loo bogsii From Coronavirus?
Sida laga soo xigtay ugu dambeeyay Coronavirus updates live, Ma laha daawo rasmi ah, iyo daaweynta ku salaysan yihiin nooca daryeelka la siiyo hargabka (ifilada xilliyeed) iyo cudurada kale ee neefsashada aad u daran, loo yaqaan daryeelka taageero, sida ay Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC)., horumarradii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in ka dib marka la tijaabiyo 100,000 bukaanka, dhiigga plasma ee deeq-bixiyeyaasha oo durba ka bogsaday Coronavirus waxay saameyn wanaagsan ku leeyihiin bukaannada Covid-19.
Waa in aad nasan oo biyo cabbo iyo haddii aad weli u malaynayso in aad u baahan tahay gargaar dheeraad ah, wac adeegyada caafimaadka, ma si toos ah isbitaalka sida aad u saamayso kuwo kale, iyo haddii aad ka fekereyso qaadashada Advil ama ibuprofen si loo daaweeyo aad qandho, ka hor inta aanad samayn qaadan daawo kasta, kala hadal dhakhtarkaaga, dhaqaatiir kala soo jeedisay in qaadashada daawooyinka waxay leeyihiin karno xumaan iyo samaan saamayn iyo wax uga sii dari kuu haddii aad cudurka Coronavirus.
Fadlan hubi kuwayaga Ma waxaa jira A Tallaalka Waayo Coronavirus sadarka, si joogto ah ayaanu uga cusboonaysiinnaa horumarka cusub.
Waa Maxay farqiga u dhexeeya Coronavirus Oo Hargab xilliyeedka?
1. Heerka dhimashada ka ifilada xilliyeed caadi ahaan waa ku dhawaad 0.1% gudaha Mareykanka, sida laga soo xigtay The New York Times, halka heerka dhimashada ee COVID-19 muuqataa in ay ka badan tahay in ifilada.
2. Coronavirus waa cusub iyo ifilada xilliyeed yimaado xilliga qaboobaha kasta.
3. Coronavirus iyo fayraska hargabka, halka la mid ah calaamadaha, waxaa laga qoysaska gebi ahaanba ka duwan oo ah fayrasyo.
4. Saraakiisha Caafimaadka ayaa sheegay in talaalka loogu talagalay COVID19 noqon kartaa in ka badan hal sano ah iska, laakiin maalmahan waxay umuuqataa Tallaalka'vid-19 'si dhakhso ah ayuu dhakhso u dhici doonaa. Tallaalka hargabka ayaa si caam ah loo heli jiray oo shaqeynayay sannado hadda.
Waa Maxay The Virus Major Risk Iyadoo The Corona?
Khatarta ugu dhabta ah ee Corona Virus ma aha tirada dhimashada. Khubarada odhan nidaamyada caafimaadka ee laga yaabaa inuu si fudud u noqoto tan badiyey tirada xaaladaha u baahan in cusbitaal - iyo, badanaa hawo neefsashada taageero.
Dadka qaarkood waxay u gudbin karaan fayraska Corona Coronavirus in Hargabka ama ama Hargabka Coronavirus ama Covid19 ama Covid19 ama Corona ama SARS-makaas-2, kuwa waa magacyadii iman kara for this faafa cusub.
tareenada rakaabka ma samayn gaadiidka xamuulka, darteed waxaa jira halis ma fayrusyada xoolaha gudaha tareenada.
Waa Maxay Rate Dhimashadii Of Covid19?
heerka dhimashada ee COVID19 ama Coronavirus ama Corona sida ay loo yaqaan waa ka duwan yahay ka dalka si ay dalka oo ay jirto sabab lagu rumaysan dad badan oo aadan soo sheegin Covid19 tan dadka intooda badan ay leeyihiin calaamado yar yar.
In daraasadda la daabacay 18-kii February ee Shiinaha CDC Weekly, cilmi helay heerka dhimashada ka COVID-19 si ay u noqon agagaarka 2.3% ee dhulweynaha China Laakiin ilo kale ayaa sheegay in heerka dhimashada ee Covid-19 ee run ahaantii waa wax badan hoose ee Shiinaha. Daraasad kale oo ku saabsan 1,100 bukaan isbitaal ee Shiinaha, Feb daabacay. 28 ee Journal New England ee Medicine, ogaaday in heerka guud ee dhimashada yar ahaa, ku dhowaad 1.4%.
Laakiin note wanaagsan waa in South Korea ka mid ah dadka oo dhan in tirada dhimashada ka Covid19 ee u muuqataa in ay aad u yar yahay, sababtoo ah dadweynaha dhegaystay ururada caafimaadka iyo isbitaalada deg deg ah ku jiray in ka fal on this Covid19 Faafa cusub.
Halkan waxaa ah liis gaagaaban oo ah Qiimaha Dhimashada ee Wadanka oo la cusbooneysiiyay 30/4/2020 iyo waxa ka hooseeya Chart kale heerka dhimashada by da'da.
xaaladood oo la xaqiijiyay
Number of dhimashada
heerka dhimashada (%)
Boqortooyada Ingiriiska 165,221 26,097 15.8
Masar 5,268 380 7.21
Filibiin 8,212 558 6.79
Shiinaha 83,944 4,637 5.52
Ciraaq 2,003 92 4.59
Jamhuuriyadda Dominikan 6,652 293 4.4
Bosnia iyo Herzegovina 1,677 65 3.88
Hindiya 33,062 1,079 3.26
Coronavirus City By City Map
Tani waa Coronavirus cusub khariidada shows in aad ka updates Corona iyo kiiska iyo sidoo kale dadka ku bogsiiyey ka fayraska City by City Worldwide.
Miyey habboon tahay in aan Safarka Inta lagu jiro Covid-19 dillaaco?
Waqtigaan dowladuhu waxay isku dayayaan inay xakameeyaan fayraska iyagoo sameynaya xadidaado guud ahaan iyo xayiraadaha safareed, laakiin tani Coronavirus ama Covid-19 ka dillaacay ma joojin doono dunida muddo dheer.
Waxa aannu qabnaa, haddii aad qorsheeyo safarka aad dabayaaqadii sanadkan, aad ku raaxaysato laga yaabaa dhimis wanaagsan haddii aad ballansan safarka hadda.
Meelo badan tareenada waa jidka ugu dhakhsaha badan si aad u hesho si aad u socoto, tan iyo markii ay u safraan dhexe ee magaalada.
Prague in Tareenadu Frankfurt
Waa Maxay The Shabakadaha Best Waayo, Corona News?
1. Ururka Caafimaadka Adduunka.
3. Xarumaha xakamaynta cudurada iyo ka hortagga (CDC).
Coronavirus at jaleecada a
Waa Maxay Muujis The Of Faafidda Coronavirus?
Halkan waxa aad ka heli kartaa Muujis Corona ah, tirada xaaladaha, ugu tirada muhiimka ah ee dad kale oo hore ka Coronavirus bogsiiyey, iyo nasiib sidoo kale dadka sida badan ka Coronavirus dhintay
Guji erayada Show Muujis iyo aad arki doonaa waxa aad raadinayso
Halkan waxaa ku qoran garaafka ka dillaacay Corona ah in dal kasta
Ma waxaa jira A Tallaalka Waayo Coronavirus?
Ma jiro tallaal rasmi ah Coronavirus, laakiin waxaa jira dalal badan iyo dhowr shirkado dawooyin ah (AstraZeneca / Sinopharm / Casri ah / Pfizer / Biyoolajiye CanSino / Sinovac) kuwaas oo ka shaqeeya tallaalka Coronavirus, xiriirkan waxaad ka heli kartaa Tallaalka loogu talagalay raad-raacaha coronavirus.
Australia ayaa sheegtay in ay noqdaan kuwa ugu horeeya kuwaas oo loo isticmaalo daroogada loo yaqaan si aad ugu bogsiisid bukaanka Coronavirus a, waxay isticmaali 2 daawooyinka la garanayo, mid ka mid ah HIV oo kale ah ee duumada iyo Dhakhaatiirta ayaa sheegay in dadka bukaanka ah ee ka soo jawaabay si aad u wanaagsan in daawooyinka iyo sameeyey fayraska baaba'aan in 48 saacadood, haddii ay taasi helo jawaab-celin dheeraad ah meelaha kale ee caalamka, tani waxay noqon kartaa dadka daawo waxay sugayeen si ay u xaliyaan dhibaatada this Coronavirus.
USA bilaabay baaritaano maxkamad Tallaalka Coronavirus Goldogob baaritaano xoolaha iyo Israa'iil Biological Machadka Cilmi- ayaa hore u sheegay in uu ka helay daawo, laakiin ma xujooyin weli.
Dhakhaatiirta adduunka oo dhan iyo FDA waxaa lagu sheegay in daawo ah waxaa laga heli karaa gudaha dhiiggii kuwii horeba isu bogsaday Corona ah, link kale u fiican yahay akhriska ku saabsan helitaanka daawo loogu talogalay Coronavirus ka dhiiggii kuwii hore u bogsan.
Japan helay daroogada waxtar u leh Coronavirus in waxa la baadhay on ka badan 300 bukaanka, magaca daroogada waa favipiravir iyo waxaa lagu yaqaan in ay shaqo ku saabsan ifilada ee Japan.
update kale Live on Coronavirus waxaa ka imaanaya France, a Doctor magacaabay Didier Raoult, sameeyey is biirsaday ee daroogada oo ay ku jiraan hydroxycloroquine (magaca ganacsiga for chloroquine) iyo azithromycin, uu tijaabo muujiyeen natiijooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan Corona ah.
Ugu dambayn, Waxaa jira warbixino ka imanaya Mareykanka oo sheegaya in shirkadda Sayniska ee Gilecaad ay guulo dhow ka gaartay daaweyn lala qaatay dib-u-habeyn si loo dedejiyo soo kabashadaada laga bilaabo Coronavirus.
Maxaa dhici doona Iyadoo The Coronavirus?
In kasta oo updates ugu dambeeyey on Corovnavirus ka dawladaha waa in virus Corona dhawraa hi, Nobel ku guuleystay abaalmarinta iyo Stanford Professor iyo Biophysicist, Michael Levitt waxa uu sheegayaa in Corona waxaa dhab ahaan hoos u gaabis,
Laakiin ha war wanaagsan oo ku saabsan Corona Virus Doqon aad, Michael Levitt ayaa sidoo kale sheegay in dowladaha waxaa loo baahan yahay tallaabooyin waa si ay u cirib-covid19 magac kale ee Coronavirus ee Asia, ka dib markii ay marayaan tirakoobka of Covid-19 ka Hubei Shiinaha, taas oo Mr Levitt ayaa sheegay in this waxaa uu waxa ugu fiican fala (xisaabinta iyo tirakoobka), tan iyo waxbana kama uu helin daawo u ah Corona ah, ayuu suura gelinayaa in virus Corona waa la gaabis, laakiin baahida dadweynaha inay dhegaystaan ​​hanuunka ee la xiriirta Coronavirus ka dawladaha ka
Haddii aad soo gaadhay qayb ka mid ah ee qoraalka, fadlan akhri oo dhan ee maqaalka ku saabsan Michael Levitt oo arag sida dhaqankan cusub ee Coronavirus ay bilaabeen in ay isbedel 1-dii Febraayo iyo 7-dii February ee.
End Of our Maalinta Coronavirus Live Map iyo Updates, taas oo aanu si joogto ah updated siin doonaa view ugu wanaagsan ee la Corona ah Maxaa dhici doona.
Maxaa ka dhigay Covid-19 Si Start?
Sharaxa ugu danbeysay oo sabab u Covid-19 oo haatan waa magaca cilmiyaysan ee Corona Virus weli ma hubo, laakiin marka hore Covid-19 kiis ka soo jeedaa November 17 2019, iyo warbixinta ku sheegay in magaca xayawaanka bangoliin la xiriira bilowgii Covid-19 ka dillaacay.
ra'yigaa kale oo dheeraad ah si weyn loo yaqaan waa in Corona bilaabay in Wuhan suuqyada qoyan ee Shiinaha, iyo xoolaha hadda si dhib ah waa fiidmeerta.
safarka tareenka waa ugu Jidka Eco-friendly in ay safarka, si la xusuusto in markii mar shishaysa adag, waxaana rajeyneynaa inay dhawaan doona.
Frankfurt inay Tareenadu Geneva
Marka eegaya Shiinaha si degdeg ah loo kordhiyo iyo hoos u of Coronavirus, ah cilmi-qarsoodi bilaabay in ay kordhin ee ra'yi ah in laga yaabo in qof kasta oo si dhab ah Shiinaha helay Corona iyo 90% ma muujiyaan wax calaamado ah, 5% helay hargabka a, iyo 5% daryeel caafimaad oo loo baahan yahay, laakiin isbitaal oo dhan ma, Tani macno samaynaysaa heerka gaar ah, laakiin tani sidoo kale lagu sharxayaa sababta ay dawladaha codsanaynaa muwaadiniinta in ay ku sii hoos qufulka, maxaa yeelay, sidan ay u hubin karaa in nidaamka Hospital ma burburo oo aan dad badan oo dhan waqti isku mid ah u yimid inuu Isbitaalka caawimaad Coronavirus, In isbitaalada casriga ah ee dunida waxay leeyihiin qalabka neefsashada gaar ah ama waxaa la yidhaahdaa, neefsashada Medical, laakiin mashiinada kuwa aysan ku filneyn qof kasta oo dhan waqti isku mid ah.
Ra'yigaa kale Coronavirus yaaco ee Shiinaha, waa in, maxaa yeelay, Shiinaha waa uu Kalitaliskii a, dad addeeci codsiyada dowladda ay, iyo marka qof ayaa la sheegay in ay sii joogaan guriga iyo gacmahooda mayraan, waxay ku sameeyeen wixii ay la weydiiyey, iyo hadda la og yahay in Coronavirus Xilliga cudurku waa in 14 maalmood si ay dadweynaha ka soo dibadda ku dareysa, Waxay uma ay oggolaan Covid-19 sida ay ku caan baxay faafinta Shiinaha.
In our view this Aragtiyaha Coronavirus labada macne samaynaysaa, laakiin si ay sax ah, waa inaad addeecdaan waxa dowladda waxaa kuu sheegaysa in ay sameeyaan, iyo sii joogo guriga 14 maalmood, si aad u oggolaatid Coronavirus in ay hoos u dhac!
Sida loo Xalliyaan Coronavirus Faafa?
On 11-kii Maarso 2020, Hay'adda Caafimaadka Adduunka waxay shaaca ka Coronavirus Faafa a, laakiin waxaa jira dalal badan oo hore ha la il daran virus this, Sidee ay xamili Corona ah?
Waxaa jira dhowr siyaabood oo teori in ay la tacaalaan Faafa Corona ah, sida model British oo adeeca oo dhan elderlies inay joogaan albaabka loogu talagalay 3 bilood, oo ha inta badan dadweynaha heli Corona iyo sidoo kale bogsiiyo ka on gaar ah.
Laakiin waxaa jira jidka la xaqiijiyay in laga takhaluso Faafa Corona ah, iyo in uu yahay Takooro iyo quarantining dadka sida South Korea sameeyey, ama cakiran sida Shiinaha sameeyey, Kuwani 2 Hababka wax ka yar 2 bilood, soo dejiyey Coronavirus lowyaha ay kuwa 2 dalalka.
Waxaad Heli Kartaa Coronavirus jeer?
Tani waa su'aal wanaagsan, iyo jawaabta sida ay xogta hadda waa No, Baarayaasha waxay soo gabagabeeyeen in dadka uusan qaadi karin cudurka Coronavirus laba jeer mana suurtagal.
In wadamo badan oo caalamka ah, marka aad ka soo laabto dibada, waxaa la weydiiyey idiin karantiil guriga of 14 maalmood sababo la iman kara in aad haysato virus ee Covid-19, sababaynta xagga dambe ka gaad, waa in aad sida qof aan u qaadsiin dad kale halka aan ogayn inaad ka kooban fayraska Covid-19 aad gudaha, dadka intooda badan mid aan helin wax calaamado ah, iyo kuwii wax calaamado ah Covid-19 ayaa ku shaaca ka inta lagu guda jiro muddo ah 14 maalmood.
Fikradda is karantiil Jidka maamulka Chinese iyo Korea maareeyay ee Covid-19 ka dillaacay dalalka ay u yimaadeen, weedha kale lagu tuuray hawada waa Kala fogeynta Bulshada marka qof ayaa ku hadlay waxyaalaha ku saabsan Karantiinka sabab u Covid-19.
Halkee dadku ku qaadaan cudurka Coronavirus Iyadoo?
Sida laga soo xigtay warbaahinta Israel, meelaha ay dadku ku qaadaan cudurka Coronavirus ka jira:
1. Suuq weyn
2. Sunagogga ama Kaniisadaha
3. dukaamada Guud
5. Kiliniga Caafimaadka
Tirada 1 ayaa tirada ugu badan, waayo, halkaas oo ay u badan tahay waa in aad cudurka ka Coronavirus, sidaas darteed fadlan taxaddar iyo nabad.
Yaa Ka walwal ku habboonayd From Covid19?
Dadka ka soo jeeda caafimaadka soo socda waa in welwelin ka Covid19:
1. Cadaadis dhiig oo sarreeya
2. cudurka wadnaha
3. Diabetes ama sonkorowga Mellitus
4. Neef ama dhibaatooyin kale oo sambabada
6. Hawlgabka kelyaha ee
Covid19 waa nooc cusub oo ka mid ah Hargabka iyo aad u faafa, dadka oo dhan waa in laga walwalo Coronavirus, laakiin dadka ka soo jeeda caafimaadka soo socda waa in welwelin ugu ka Covid19.
Dalalka Xaggee No Coronavirus
Sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyay Coronavirus, waxaa jira hadda 22 waddamada ma Corona ayaa la aqoonsaday.
Maxaa beddeli doonaa ka dib Covid19 waa ka badan?
wax Dhowr isku mid ma noqon doonto ka dib markii Covid19 waa ka badan:
1. The safka in socdaalka markii wadanka soo galaya noqon doonaa waqti dheer ka badan sidii hore.
2. Waxaad u baahan doontaa in ka badan baasaboor si ay safarka, tusaale ahaan shahaadada difaac Covid-19.
3. Recovery ka Covid19 isku dal kasta ma noqon doonto.
4. Dadka aan aad u jeclaan doonaa marka aad jiran tahay.
5. Dadka dooran doonaa si ay u isticmaasho tareen dheeraad ah iyo gaadiidka dhulka.
6. Dalalka xayaysiin doono tayada caafimaadka iyo hawada.
Coronavirus Health Dalalka Safety saraysiinta
Warbixin dhawaan ayaa lagu xayeysiiyaa Top Coronavirus Dalalka Safety Caafimaadka darajada, oo halkan waa waxyaabaha muuqda ee warbixinta
Waxaad ka heli kartaa in ka ka dib markii link intiisa kale waddammada, iyo sidoo kale Country Heerka Halista Inta lagu jiro COVID-19 Faafa
Hababka Tijaabada Coronavirus
Sababtoo ah waxaan horeyba dhowr bilood ugu jirnay masiibada Coronavirus, durba waxaa jira habab badan oo baarista Coronavirus, Marka hore waxaa jira baaritaanno lagu ogaanayo haddii aad jiran tahay, laakiin sidoo kale tijaabooyin si loo ogaado haddii aad qabtid fayraska 'Covid19 virus' iyo haddii aad leedahay Antibodies.
Laakiin qaybta ugu muhiimsan ee looga bixi karo xaaladdan 'Coronavirus' waana tan farriinta WHO u direyso dhammaan waddamada adduunka., tijaabada tijaabada imtixaanka.
Goorma ayuu Covid-19 Dhamaanayaa
Goormuu dhammaanayaa Covid-19 waa su'aal midkasta uu isweydiinayo, waana inaan xasuusano inaan xaq nahay 3 bilo galay masiibada Covid-19, laakiin jawaab ayaa laga yaabaa inay qortay Jaamacadda Tikniyoolajiyadda iyo Naqshadeynta ee Jaamacadda Singapore (SUTD).
Shaybaarka hal-abuurka ee Jaamacadda ayaa adeegsaday moodallo saadaalin ah oo ka mid ah SIR (cudurka u nugul ama u nugul) Qaabka loo saadaalin karo goorma ayuu Covid-19 ku dhammaan doonaa waddan kasta oo ku saleysan qodobo kala duwan oo xog ah oo lagu sharraxay xiriirinta sare, waana kuwan natiijooyinkooda qaar – Qaabka natiijooyinka 97% ciribtirka iyo 100% baabi'inta, haddii ay sax yihiinna duniduna waxay ku socotaa waddo soo kabasho aad u dhakhso badan oo ka socota masiibada Covid-19.
* Way qaadatay 8 bilood bilaa xidhnayn adduunka oo dhan sidii aan ku aragnay Covid-19, si ay u ka takhalus qaybta weyn ee SARS, iyo dillaaca SARS socday inta u dhaxaysa sannadihii 2002-2003, sidaa darteed waxay umuuqataa moodellada jaamacadaha Singapore inay sax yihiin.
Waxaan isku daynay intii karaankeena ah inaan kuugu adeegno macluumaadka ugu wanaagsan ee noolasha tooska ah ee Coronavirus oo aan ka soo aruurinay ilo badan oo la isku halleyn karo oo ku yaal internetka iyo xarumaha cilmi baarista ee adduunka oo dhan., Macluumaadkayaga waxaa ku jira khariidadaha nool ee Coronavirus, waana muhiim in la carqaladeeyo khariidadahaan 'Covid-19' ma ahan kuwo taagan mana aha kuwo sii cusbooneysiiya dhowr jeer maalintii.
Intaa waxaa sii dheer xitaa xiriiriyeyaashayada la xiriira corona iyo qaybaha Coronavirus waa la cusbooneysiiyaa markii macluumaadka cusub ee Coronavirus ay dillaacaan.
Ma doonayno in aad cabsi ka Corona ah, ka our fahamka ay hargabka kale ee xilliga qaboobaha, laakiin marna ma noqon kartaa mid aad u ammaan ah, marka aad go'aansato in aad safarka, xusuuso this page Coronavirus Live Updates Oo Map oo ay isticmaalaan adeegga, Waxaan leenahay u Khayr oo ugu jaban qiimaha tareenka Ticket, Save A tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada this page gal goobta, aad sidoo kale link to this page sidii tixraac ama karaa riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/coronavirus-updates-map/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)